सिरिन्ज आक्रमणको 'फोबिया’- उपत्यका - कान्तिपुर समाचार
सिरिन्ज आक्रमणको 'फोबिया’
पछिल्लो डेढ महिनामा मात्रै टेकु अस्पतालमा ३० जना महिला अस्पताल पुगे तर आक्रमण भने थिएन
श्रावण ३, २०७६ फातिमा बानु
काठमाडौँ — बुधबार दिउँसो राजधानीकी २१ वर्षीया युवती आत्तिँदै टेकुको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पताल पुगिन् । ढाडमुनिको भागमा सिरिन्ज घोपिएको शंकामा उनी अस्पताल पुगेकी थिइन् ।
चिकित्सकले चेकजाँच गर्दा सानो रातो डाबर मात्रै भेटियो । सिरिन्जले घोपे जस्तो कुनै लक्षण थिएन । बसमा यात्रा गर्दा पछाडिको सिटबाट कसैले तिखो वस्तुले घोचेजस्तो लागेको उनले बताइन् । उपचारमा संलग्न डा. रिना देवकोटाका अनुसार उनलाई सिरिन्ज आक्रमणको ‘फोबिया’ ले समातेको हो । चिकित्सकको परामर्शपछि मात्रै उनी ढुक्क भएर घर फर्किन् ।
त्यस्तै, एक साताअघि ४५ वर्षीया महिला पनि नाडीमा रातो डाम लिएर आत्तिँदै अस्पताल पुगिन् । मन्दिरमा लाइन बस्दा पछाडिबाट कसैले सुई रोपिदिएजस्तो लागेपछि उनी अस्पताल पुगेकी थिइन् । चिकित्सकले ‘कसले के हानेको हो मान्छे देख्नुभयो ?’ भनेर सोध्दा उनले यस्तो कोही नदेखेको बताइन् । चेकजाँच गर्दा उनको नाडीमा आफैंले कोतरेका घाउ र रगत थियो । उनी पनि यस्तै फोबिया देखिएको डा. देवकोटा बताउँछिन् ।
यी दुई पात्रजस्तै दिनहुँ ३/४ जना सिरिन्ज आक्रमणको ‘फोबिया’ बाट पीडित भएर महिला र किशोरी टेकु अस्पतालमा पुग्ने गरेका छन् । पछिल्लो डेढ महिनाको अवधिमा मात्रै यस्तै फोबिया लिएर ३० जना महिला अस्पताल पुगे । ‘आएजति एक जनामा पनि सिरिन्ज रोपिएको लक्षण भेटिएन । तिखो वस्तुले हल्का घोचेजस्तो लागेकै आधारमा उनीहरू अस्पताल आउँछन्,’ डा. देवकोटाले भनिन् । उनीहरू कसैमा रगत बग्ने, सुन्निने र घाउ हुनेजस्ता सिरिन्ज रोपिँदा देखा पर्ने लक्षण समस्या नभएको उनले बताइन् ।
सिरिन्ज आक्रमणका त्रासले एचआईभी र हेपटाइटिस संक्रमण सरेको डरका कारण आत्तिएर अस्पताल पुग्ने गरका छन् । यसरी पुगेकामध्ये कसैलाई पनि उपचारको आवश्यक परेको छैन । अस्पतालले परामर्श मात्रै गरेर पठाइदिने गरेको छ । बसमा यात्रा गर्दा, बाटोमा हिँड्दा थोरै मात्रै तिखो वस्तुले घोचिहालेमा महिला र किशोरी अस्पताल पुगिहाल्ने गरेका छन् ।
अस्पतालकी नर्सिङ इन्चार्ज मञ्जु अधिकारीका अनुसार सामान्य ठेस लाग्दासमेत सिरिन्ज आक्रमणकै शंकामा उनीहरू अस्पताल पुग्छन्, आत्तिन्छन् । ‘विशेष गरी मिडियामा सिरिन्ज आक्रमणको समाचार आउन थालेपछि यस्तो फोबिया बढेको छ । धारिलो वस्तुले घोचेकी एचआईभी नै सरिहाल्यो भन्ने डर छ उनीहरूमा,’ उनले भनिन् ।
डा. देवकोटाका अनुसार संक्रमित सिरिन्जले अरूलाई घोप्ने कुरा आममानिसले सोचेजस्तो सामान्य र सजिलो छैन । उनले भनिन्, ‘संक्रमित व्यक्तिले आफ्नो शरीरबाट रगत निकालेर १५ सेकेन्डभित्र सिरिन्जका माध्यमबाट अरूको शरीरमा लगाए मात्रै रोग सर्छ । यसरी मिलाएर कसैले सिरिन्ज आक्रमण गर्न त सम्भवै नै छैन ।’
यदि कोही संक्रमितले कुनै अर्को व्यक्तिमा रोग सार्नका लागि आफ्नै रगत सिरिन्जमा भरिहाले पनि रोगका कीटाणु हावाको सम्पर्कमा आउनेबित्तिकै मरिहाल्छन् । सिरिन्ज आक्रमण भई नै हालेमा पनि एचआईभी र हेपटाइटिसको संक्रमण सर्ने सम्भावना अत्यन्तै न्यून (करिब शून्य दशमलब १५) हुने बताउँदै उनले थपिन्, ‘रगत र सिरिन्जमा काम गर्ने प्रोफेसनल व्यक्तिबाहेक अन्य व्यक्तिमा सिरिन्जका माध्यमबाट एचआईभी सरेको विश्वमै एउटा पनि रेकर्ड छैन । त्यसैले डराउनु पर्दैन ।’
सिरिन्ज आक्रमण भए के गर्ने ?
सिरिन्ज आक्रमण भई नै हालेमा कत्ति पनि नआत्तिन डा. देवकोटाको सल्लाह छ । उनी भन्छिन्, ‘सुई लाग्नेबित्तिकै रोपिएको ठाउँमा साबुन पानी लगाएर पाँच मिनेटसम्म खुला धारामा पखाल्ने । यसो गर्दा रोगका भाइरस पखालिएर जान्छन् ।’
घाउ लागेको ठाउँमा चुस्ने, कोतर्ने या निचोर्ने गर्दा संक्रमण हुन सक्ने हुँदा यसो नगर्न सल्लाह दिँदै उनले थपिन्, ‘सिरन्ज लाग्नेबित्तिकै भाइरस शरीरमा पस्न पाउँदैन । घाउ कोतर्ने चलाउने गर्दा भाइरस छिर्ने बाटो खोलिएर शरीरमा पस्न सहज हुन्छ । साथै, सिरिन्ज घोपिँदा सक्दो चाँडो नजिकको अस्पतालमा पुगेर उपचार खोज्नुपर्ने उनले बताइन् ।
प्रकाशित : श्रावण ३, २०७६ ०७:३५
अदालत भवनको नक्सा पास भएन
श्रावण ३, २०७६ कान्तिपुर संवाददाता
भक्तपुर — भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवन निर्माण कार्य अन्योलमा परेको छ । भवन निर्माणका लागि तीन वर्षदेखि प्रक्रिया थालिए पनि बजेट अभाव तथा नक्सापास नहुँदा भवन निर्माण कार्य अलपत्र परेको अदालतले जनाएको छ ।
भवन निर्माणका लागि नक्सापास भएपछि मात्र सर्वोच्चसँग संरचना निर्माणको सैद्धान्तिक सहमति हुने अदालतका श्रेस्तेदार घनेन्द्र अधिकारीले बताए । सैद्धान्तिक सहमतिपछि मात्र बजेट आउने भनेकाले अदालतसँग हाल बजेट अभाव छ । ‘प्राविधिकले नयाँ भवन निर्माणका लागि करिब १ अर्ब रुपैयाँ लागत इस्टमेट निकालेको छ तर, बजेट पारित भएको छैन,’ अदालतका श्रेस्तेदार अधिकारीले भने, ‘भवनको नक्सापास प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ तर नगरपालिकाले नक्सापास गरिदिएको छैन ।’
मुद्दाको चापलाई मध्यनजर गर्दै नयाँ भवनको योजना बने पनि समयमा बजेट पारित नहुँदा अन्योल थपिएको अदालत जनाएको छ । भक्तपुर जिल्ला अदालतमा वार्षिक करिब २ हजार मुद्दाको फैसला हुन्छ । ५ वटा इजलास भएको अदालतमा अभिलेख राख्ने दराज राख्ने ठाउँको समेत अभाव छ । ‘अदालतमा बैतनी वकिलको दरबन्दी छ तर, बस्ने कोठा छैन,’ अधिकारीले भने, ‘मेलमिलाप कक्ष छैन ।’ पर्याप्त इजलास चेम्बरको समेत व्यवस्था नभएको अदालतमा फाँट अपुग रहेको उनी बताउँछन् ।
मिसिल राख्ने ठाउँको समेत अभाव भएपछि सर्वोच्च अदालतले जिल्ला अदालतलाई भक्तपुर नगरपालिकाले आयोजना गरेको कमलविनायकस्थित ‘तुमुचो दुगुरे चोखा जग्गा एकीकरण आयोजना’ क्षेत्रमा जग्गा खरिद गरी भवन निर्माणको प्रक्रिया थालेको थियो । अदालतले आयोजना क्षेत्रको दुई स्थानमा ११ रोपनी जग्गा खरिद गरेको छ ।
जसमध्ये ४ रोपनी क्षेत्रफलमा क्वाटर र ७ रोपनी क्षेत्रफलमा अत्याधुनिक कार्यालय भवनको तयारी गरेको छ । भवन निर्माण प्रक्रिया ढिलाइ हुनुमा बजेट मात्र नभई नगरपालिकाको मापदण्डसमेत रहेको अदालतले जनाएको छ । ‘भक्तपुर नगरको मापदण्डमा भवन निर्माण गर्दा निर्माण क्षेत्रबाट १/१ मिटर सेटब्याक छोड्नुपर्ने उल्लेख छ,’ श्रेस्तेदार अधिकारीले भने, ‘पहिल्यै मापदण्ड छोडेरै जग्गा पास गरेको स्थानमा १/१ मिटर सेटब्याक छोड्नुपर्दा जग्गाको क्षेत्रफल घट्छ ।’ उक्त मापदण्डअनुसार संरचना निर्माणमा सर्वोच्च अदालतले नमान्ने र मापदण्ड नछोडा नगरपालिकाले नक्सापास नगर्ने समस्या थपिएको समेत अदालतले जनाएको छ ।
विश्व सम्पदामा सूचीकृत भक्तपुर दरबार स्क्वायर परिसरको ९९ चोक क्षेत्रभित्र रहेको कार्यालयमा थप संरचना निर्माण गर्न सम्भव छैन । ठाउँ अभावले अधिकृतहरू इजलासमै बस्नुपर्ने बाध्यता छ । मुद्दाको चापलाई मध्यनजर गर्दै आगामी २५ वर्षपछिको मुद्दाको चापलाई समेत ध्यानमा राखी भवनको डिजाइन गरेको जनाएको छ ।
मुद्दाको चाप र फैसला कार्यान्वयनका लागि ७ अधिकृत, ४ कम्प्युटर अपरेटर थप हुने अदालतले जनाएको छ । उक्त कर्मचारी थपिँदा कार्यालयमा ठाउँ नपुग्ने श्रेस्तेदार अधिकारीले बताए । पर्याप्त ठाउँ नहुँदा अदालतले अस्थायी टहरा निर्माण गरी कार्य गरिरहेको छ ।
भक्तपुर नगरपालिकाले भने मापदण्डभित्र रहेर नक्सापास गर्न कुनै समस्या नभएको बताएका छन् । ‘अदालतको भवन निर्माणका लागि नक्सापासमा समस्या छैन, नक्साको डिजाइन मापदण्डभित्र हुनुपर्‍यो,’ भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर ९ का वडाध्यक्ष रवीन्द्र ज्याख्वले भने ।
प्रकाशित : श्रावण ३, २०७६ ०७:३३